Sexy Soo Kordhi Laydh Labad Bras & Xog Kooban
Cabbirka Koobka Mid ka mid ah Size
One Size / Ivory Hal Cabir / Madoow Hal Cabbir / Buluug Hal Cabbir / Casaan Hal cabir / Cadaan
Sexy Push Up Padded Lace Bras & Brief Set - One Size / Ivory gadaal baa laga keenay oo markab sida ugu dhaqsaha badan ayuu u soo noqonayaa markuu kaydka ku soo noqdo
Nooca Item: Bras
Waxyaabaha: Modal, Spandex
Bra Style: Dhuujiyay
Nooca suunka: Xadhkaha la hagaajiyay
Number Model: 436534
Xusuusin: 1 inch = 2.54 cm. Fadlan u ogolow qalabka 2-3cm sababtoo ah cabbirka buuggan. Fadlan hubi inaadan ilaawin ka hor intaadan bilaabin. Sababtoo ah farqiga u dhexeeya bandhigyada kala duwan, sawirkani kama muuqan karo midabka dhabta ah ee shayga.
Mar labaad ayaan amar ku bixiyaa, xirmo xirmo oo madow iyo wax jabsada. Fanaaniintu maahan mid la isticmaali karo
Sehr bequeme und weiche Unterwäsche. Qualitt für seinen Preis. Es kam gudaha 1,5 Monaten.
Aad u qurux badan. Cabbirka wuxuu ku habboon yahay 42-44. Gaarsiinta soonka Waxbadan ayaan dalban doonaa
Арна якість і обслуговування